☀️ I-Sunshine Cottage-amagumbi okulala ama-2, asanda kuhlaziywa - I-Airbnb
☀️ I-Sunshine Cottage-amagumbi okulala ama-2, asanda kuhlaziywa
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguAmber
Phila njengendawo yasekhaya kwi-Sunshine Cottage, indawo yokuhlala esanda kuhlaziywa kufutshane nombindi wePort Lincoln. Jonga indawo eselunxwemeni emangalisayo okanye uthathe uhambo olupholileyo ujikeleze iivenkile, iicafe kunye nomda wamanzi.
I-Sunlight Cottage inokuhlala ngokukhululekileyo izikhephe okanye iitreyila, abantwana kunye nezilwanyana zasekhaya. Ibekwe kufutshane nezinto eziluncedo kunye nesibhedlele-isiseko esifanelekileyo sokwenza iinkumbulo zakho zeholide ezintle.
Isanda kuhlaziywa, indawo epholileyo inokulala ukuya kuthi ga kwi-4 abantu kwaye inekhitshi elixhotyiswe kakuhle, igumbi lokuhlambela elahlukileyo (elineshawari phezu kwebhafu) kunye nempahla eyahlukileyo. Yonke ilinen ibonelelwe kwaye ibhedi okanye isitulo esiphezulu sinokunikezelwa ngesicelo.
Iindwendwe zingonwabela ixesha lokuphumla kubuntofontofo bendawo yokuhlala eshushu okanye epholileyo, ene-smart TV. Pheka ukutya kwaselwandle kwasekhaya kwi-BBQ okanye iipancakes zangeCawa ekhitshini lasegadini elinelanga. Nceda uqaphele: ukugcina le propati ifikelelekayo i-WIFI ayiqhagamshelwanga.
Yonwabela iglasi yewayini okanye ikofu phantsi kweveranda engaphambili ejonge igadi evalwe ngokupheleleyo. Iyadi enkulu yangasemva ilungile ekuhlambeni isikhephe sakho emva kosuku kumanzi acocekileyo e-Eyre Peninsula.
Isaphulelo sisebenza ngokuhlala kweveki okanye ixesha elide. Amaxabiso ngabantu aba-2, iindwendwe ezongezelelweyo zi-$15pp ngobusuku.
4.82 · Izimvo eziyi-133
I-Sunshine Cottage kukuhamba imizuzu emi-5 ukusuka kwibala lokudlala likaLoliwe kunye neTrail yeLifa leMveli, ukuhamba imizuzu eli-10 ukusuka esibhedlele kunye nokujikeleza imizuzu engama-20 ukuya kwindawo engasemanzini nakwiivenkile. Kumnqantsa endleleni egodukayo.
Ivenkile esecaleni komnyango ibonelela ngazo zonke izinto eziyimfuneko kunye nenyama, iziqhamo, ii-ayisikhrim, ukutya okuthathwayo, amaphephandaba nokunye.
ICoffin Bay kunye neTumby Bay kukuhamba ngemizuzu engama-30 kuphela okanye undwendwele iZiko loLwazi ukuze ufunde ngokhenketho lwasekuhlaleni kunye nezinto ezinomtsalane.
Siza kukuthumela umyalezo wolwazi lokungena ngaphambi kokuba ufike. Iindwendwe zinikwa ubumfihlo kodwa ukuba ufuna uncedo lwethu siyakutsalela umnxeba kuphela.